I-Borgo del '700 - Ifulethi "Orca la pipa" - I-Airbnb
I-Borgo del '700 - Ifulethi "Orca la pipa"
Frisanco, Friuli-Venezia Giulia, i-Italy
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Elio
U-Elio Ungumbungazi ovelele
Ifulethi elakhiwe edolobhaneni elincane lika-1700. Itshe nokhuni lwezakhiwo kuveza umongo wezinto eziphilayo nemvelo ezungeze izindlu, kujabulisa isivakashi ngemisindo yako.
Idolobhana ligadwe phakathi kwamakhothamo amabili amatshe, ukufinyelela kungokwabantu abahamba ngezinyawo kuphela ngaleyo ndlela kuqinisekisa ukuzola kokuphila ngesivinini esinesivinini esingokwemvelo.
Ifulethi lalungiswa ngokuphelele ngo-2020 lathola izinto zemvelo nezendabuko emizweni yakudala ngaphandle kokudela ukunethezeka.
Uyemukelwa e-Borgo Preplans efulethini elithi "Orca la Pipa".
Cabanga ngefulethi ongahlala kulo ngokuzimela nasekuphumuleni, elilungele umndeni kodwa futhi elilungele iqembu labangane.
Indawo yokuhlala ihlukaniswe ngamakamelo amahlanu:
- ithala lokungena eligcwele itafula elincane nezihlalo ezimbili ezibheke ngaphakathi kwedolobhana;
- Ikhishi / igumbi lokuhlala lifakwe konke okudingayo kanye nesitofu se-pellet ukushisa yonke indawo;
- yokugezela nge eshaweni enkulu futhi hairdryer;
- Igumbi lokulala elinethezekile elibheke esigodini;
- Igumbi lokulala elinombhede omkhulu obheke utshani obukhulu bedolobhana.
Yonke imininingwane inakekelwa ngokuhlala okungenandaba:
- Umshini wokuwasha izitsha
- Ipuleti lokungeniswa
- Mocha nakho konke okudingayo ngesidlo sasekuseni
- Amabhodwe, izitsha kanye nezimpahla zokudla kwasemini nezakusihlwa okufanele uzikhumbule!
Ngaphezu kwalokhu, isivakashi sinikezwa amashidi, amathawula nokomisa izinwele.
Ngokuzikhethela, ithelevishini ne-Wi-Fi azikho ukuze kuqinisekiswe ikhefu eliphelele ekuphithizeleni nokuphila kwansuku zonke.
Ngemizuzu emi-3 ngemoto ufika edolobhaneni laseMeduno lapho ungathola khona zonke izidingo eziyisisekelo.
Ifulethi lisendaweni yesi-2 ngaphandle kokuphakanyiswa futhi lingafinyelelwa ngezitebhisi zangaphandle. Okokugcina, ukuze uphephe kukhona umtshina wentuthu kanye ne-carbon monoxide.
I-Borgo Preplans itholakala maphakathi nemvelo futhi iseduze nezindawo eziningi ezikhangayo.
Uhambo lwemizuzu emi-5 luholela esimeni sasezulwini: umfula "iMeduna" ukulindile ukuze ubhukude futhi ugibele!
Ngemizuzu engu-15 ungavakashela amadolobhana aseFrisanco nasePoffabro, abhekwa njengamadolobhana amahle kakhulu e-Italy.
Futhi emizuzwini engu-15 ufika edolobheni laseTramonti, lapho, ngaphezu kokuvakashela idolobhana elincane, ungathatha izinkambo ezimbalwa futhi, ehlobo, uzicwilise emanzini ahlanzekile e-Emerald Pozze, achazwa ngokuthi iMaldives yaseFriuli.
Emizuzwini engama-20-30 ungafinyelela iSplimbergo yasendulo kanye nemidwebo yayo, iSan Daniele nabo bonke ubuhle bayo, iPradis, iFagagna, iManiago, iSequals nevilla yaseCarnera nezinye izindawo eziningi.
Emizuzwini engu-20 ungakwazi ukufinyelela indawo yokwethula i-paragliding kanye ne-hang-gliding yase-Monte Valinis ebambe imiqhudelwano yomhlaba ye-hang-gliding ngo-2019. Indawo ekahle yokuhamba ngezinyawo nokujabulela ukubuka noma, kalula, ubhiya endaweni ephakeme!
Ukuhamba ngebhayisikili kuzo zonke izinguqulo zakho, ukusuka e-Mountian Bike ukuya ebhayisikilini lomgwaqo noma ukuvakasha kwamabhayisikili.
Idolobhana libuye lizungezwe izinkuni ezilungele ukuhamba ngezinyawo kanye nemizila eminingana yokuhamba izintaba etholakala ngaphansi kweNatural Park yeFriulian Dolomites, indawo yamagugu ye-UNESCO.
impiegato, appassionato di Natura e sport di ogni genere. Negli ultimi 15 anni insieme a mia moglie e con l'aiuto delle nostre famiglie ci siamo impegnati a far rivivere una parte di uno splendido Borgo risalente al 1700 nascosto tra i monti del Friuli.
Amiamo l'ospitalità e arricchirci conoscendo persone nuove.
Singu-Elio noMonica futhi sibheke ngabomvu ukukwamukela endaweni yakho yokuhlala e-Borgo Preplans!
Lapho ufika sizokwamukela futhi sikubonise zonke izici zefulethi kanye nomlando wendawo.
Ngesikhathi sokuhlala kwakho sizohlale sitholakala ngocingo kanye/noma sikhona ikakhulukazi ngezimpelasonto.
Lapho ufika sizokwamukela futhi sikubonise zonke izici zefulethi kanye…
UElio Ungumbungazi ovelele